အကောင်းဆုံး CBD Vapes နှင့် ပန်းမျိုးကွဲများ (ကြိုးစားပြီး စမ်းသပ်ထားသည်) - shopgiejo.com
CBD vapes များသည် CBD စားသုံးရန် အဆင်ပြေပြီး သီးခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရသာမျိုးစုံဖြင့်ရရှိနိုင်သည်၊ vape ဖျော်ရည်များသည် CBD နှင့်သင်၏အလုံးစုံအတွေ့အကြုံအတွက် အမှန်တကယ် ခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ Vaping သည် ၎င်း၏ လျင်မြန်သော စွမ်းဆောင်နိုင်သော သဘာဝကြောင့် CBD စတင်သူများနှင့် စစ်ပြန်များ နှစ်သက်ကြသည်။ အောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆေးခြောက်ဆီအငွေ့ထုတ်ဆေးများနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြင်းပြသောမေးခွန်းများကို ဖြေဆိုနေပြီး သင်ယခုကြိုးစားသင့်သည့် အကောင်းဆုံး CBD ကျည်တောင့်များကို စုစည်းပေးပါသည်။
Vaping CBD ၏ထိပ်တန်းအကျိုးကျေးဇူးများ
CBD vape ကို အခြား CBD ထုတ်ကုန်များနှင့် ခြားနားစေသောအရာကို မျှဝေခြင်းဖြင့် စတင်ကြပါစို့။ ထို့နောက်၊ သင်၏ CBD လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို ပြန်လည်စဉ်းစားစေမည့် ထိပ်တန်းအကျိုးကျေးဇူးများကို ဤအရာများဖြစ်သည်။
CBD Vapes သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
အကောင်းဆုံး CBD vape pens ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးမှာအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ အရည်တွင် ဖော်မြူလာရှိပြီး တိကျသော CBD အာရုံစူးစိုက်မှုပါရှိသည်။ vape ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာခံချင်လဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အစပြုသူများပင်လျင်မြန်စွာကောက်ယူပါ။
CBD Vapes များသည် သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်သည်။
CBD vape များသည် အလွန်အဆင်ပြေသည်။ သင်သည် vaping ကိရိယာနှင့်သင်နှစ်သက်ရာ CBD vape ဖျော်ရည်လိုအပ်သည်။ CBD vape pen များသည် နေရာတိုင်းလိုလိုတွင် သယ်ဆောင်သွားကာ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားသည် — သင်သူတို့ကိုမလိုလားပါက CBD ကို vaping လုပ်နေကြောင်းဘယ်သူမှသိရန်မလိုအပ်ပါ။
CBD Vapes များသည် ကျယ်ပြန့်သော အရသာမျိုးစုံရှိသည်။
CBD vape ဖျော်ရည်များသည် အလုံးစုံအတွေ့အကြုံကို တိုးတက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သစ်သီးဝလံအထိ ချိုမြိန်သော အရသာရှိသောကြောင့် လူတိုင်းအတွက် ရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါသည်။ CBD စားသုံးနိုင်သောအရသာနှင့် tinctures offputting ၏အရသာကိုရှာဖွေသူများအတွက်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်။
CBD Vapes များသည် လျင်မြန်စွာ အကျိုးသက်ရောက်သည်။
CBD ၏ပုံစံအတွက်စားသုံးသောအခါ gummies နှင့် စားသုံးနိုင်သောအသည်းက အများစုကို ဖြိုခွဲတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က ၄ ရာခိုင်နှုန်းပဲ သုံးပါတယ်။ တစ်ဖက်တွင်၊ CBD သည် vaping လုပ်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အဆုတ်ထဲသို့ တည့်တည့်ဝင်သွားပြီး ကွဲမသွားဘဲ သွေးထဲသို့ ရောက်သွားပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၊ ခန္ဓာကိုယ်သည် CBD ၏ 4% ကိုစုပ်ယူနိုင်ပြီး CBD vapes သည် CBD ကိုယူရန်အမြန်ဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
CBD Vape Oil ဆိုတာ ဘာလဲ
CBD vape ဆီ သို့မဟုတ် ဖျော်ရည်တွင် လျှော်ပင်များတွင် တွေ့ရသော ဓာတုဒြပ်ပေါင်း cannabidiol ပါရှိသည်။ နာမည်ရှိသော်လည်း၊ ဆီမပါဝင်ပါ။ ယင်းအစား၊ e-cigarette နှင့် လိုက်ဖက်သော အီး-စီးကရက် ကိရိယာနှင့် ရှူသွင်းရန်အတွက် အသုံးပြုရန် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, CBD အဆီများ ရှူသွင်းရန် မရည်ရွယ်သော်လည်း မျိုချမိသည် ။
CBD ပန်းဆိုတာ ဘာလဲ
Cannabis Sativa မှလာသော CBD ပန်းသည် လူကြိုက်များသော cannabinoid ကိုခံစားရန် အသန့်ရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူများစွာသည် ပုံမှန်ဆေးလိပ်များကဲ့သို့ CBD ပန်းမျိုးကွဲကို ဆေးလိပ်သောက်ရန် ရွေးချယ်ကြသည်။ Indica၊ Sativa နှင့် hybrid ရွေးစရာများ ရှိပါသည်။ Indica မျိုးစိတ်သည် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသော အာနိသင်များကို ပေးစွမ်းသည့်အတွက် လူသိများပြီး Sativa မျိုးကွဲများကို ၎င်းတို့၏ ခွန်အားဖြစ်စေသော ဂုဏ်သတ္တိများအတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ Hybrid မျိုးကွဲများသည် မျှတသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ပေးစွမ်းသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် vaping အပြင် CBD ပန်းကိုစားသုံးနိုင်သောအစားအစာများတွင်လည်းထည့်နိုင်သည်။
Vaping CBD က ငါ့ကို မြင့်မားစေမှာလား။
အခြား CBD ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်၊ CBD vape များသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှုပ်ရှားနိုင်သော အရာဖြစ်သည့် cannabidiol ပါဝင်သောကြောင့် သင့်အား မြင့်မားစေမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ vaping CBD သည် သင့်အား ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာခံစားရစေပြီး ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုအခြေအနေ သို့မဟုတ် THC ပေးဆောင်မှုမပေးဘဲ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပြီး စိုးရိမ်သောကလက္ခဏာများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ရောင်းချသူများထံမှ လျှော်ဆီ vape pen များကို ဝယ်ယူရန် အရေးကြီးပါသည်။
CBD ဘယ်လောက် Vape ရမလဲ။
CBD vaping နှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ၊ တစ်ခုတည်းသောအရွယ်အစား-ကိုက်ညီ-အားလုံးချဉ်းကပ်မှုမရှိပါ။ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ အရပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် သင်ရရှိလိုသော အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ ရှူရှိုက်မိခြင်းကြောင့် CBD vape ဖျော်ရည်သည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ မြန်မြန်ဝင်ရောက်ပြီး ရလဒ်များ အလွန်လျင်မြန်ကြောင်း မှတ်သားထားပါ။ အခြား CBD ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့ပင်၊ သေးငယ်သောစတင်ပြီး ဆေးပမာဏကို တိုးမြင့်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နေ့ကို ၂-၃ ကြိမ်လောက် လိမ်းပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးပေးပါ။
CBD Vape Oil က ဘာတွေလဲ။
Endocannabinoid System (ECS) သည် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည့် ဆဲလ်အချက်ပြစနစ်ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ESC သည် ခုခံအားလုပ်ဆောင်ချက်၊ စိတ်အခြေအနေ၊ အိပ်စက်ခြင်းနှင့် မှတ်ဉာဏ်ကဲ့သို့သော အရေးကြီးသောအရာများကို ထိန်းညှိပေးသည်။ CBD vape ကိုအသုံးပြုသောအခါ၊ cannabinoids များသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်ပြီး ESC ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် သင်သည် စိတ်အေးလက်အေး၊ ဟန်ချက်ညီပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုကို ပိုခံစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် နာတာရှည်ဝေဒနာများကို ထိထိရောက်ရောက် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး သင်၏အိပ်စက်မှုသံသရာကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။
CBD Vape သည် သင့်အား မည်သို့ခံစားရသနည်း။
CBD vaping ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားသည်။ ၎င်းသည် "မြင့်မားသော" ခံစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ CBD vape များသည် THC မှ ကင်းစင်သည် သို့မဟုတ် တရားဝင်ပမာဏ 0.3% ထက်နည်းပါသည်။ CBD ၏ ယေဘူယျအကျိုးကျေးဇူးများမှာ သက်တောင့်သက်သာရှိသော ခံစားမှု၊ နာကျင်မှုကို သက်သာစေခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုကောင်းခြင်း၊ နှင့် သိသာထင်ရှားသော စိုးရိမ်ပူပန်မှု လက္ခဏာများဖြစ်သည်။
CBD ရေနံပုံးများကို Vape လုပ်နည်း။
CBD ကျည်တောင့်ကို စတင်အသုံးပြုရန်၊ ၎င်းကို vape ဘက်ထရီတွင် အားသွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘက္ထရီအများစုတွင် ကျည်တောင့်ကို အားအပြည့်သွင်းသည့်အခါတွင် သိရှိနိုင်စေမည့် မီးရောင်ရှိသည်။ ထို့နောက် ယမ်းတောင့်ကို အသက်သွင်းရန် လိုအပ်သည်။ အချို့သော ခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် ရှူရှိုက်ရန် စတင်ခြင်းဖြင့် အသက်ဝင်ပါသည်။ ကြာကြာကိုင်ထားလေလေ အခိုးအငွေ့များလေလေ ဖြစ်လာလေပါပဲ။ အသက်ရှူမဝခင် 3-5 စက္ကန့်လောက် ဖိထားပါ။
CBD Oil Cartridge တွင် Hit မည်မျှရှိသနည်း။
သင်၏ CBD vape cartridge မည်မျှထိမှန်မည်ဆိုသည်မှာ အချက်များစွာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမှာ သင့်ဘက်ထရီ၏ ဝပ်အားဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဝပ်အားမြင့်မားသောဘက်ထရီကို ဝှေ့ယမ်းပါက၊ ၎င်းကို မကြာခဏ အားသွင်းရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ရာ ယမ်းတောင့်၏ သက်တမ်းကို လျော့ကျစေသည်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဆီရဲ့ viscosity ပါ။ ဆီပိုများလေ၊ လောင်ကျွမ်းလေ ပိုမြန်လေဖြစ်ပြီး၊ ကိုက်တိုင်းတွင် ဆီပိုသုံးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် CBD vape pen ကို အပူချိန်မြင့်မြင့်ထားပါက ဂရမ်ယမ်းတောင့်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာသုံးစွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
CBD Cartridges ဘယ်လောက်ကြာကြာခံသလဲ။
½ ဂရမ် (500 မီလီဂရမ်) ရှိသော ဆေးခြောက်အဆီငွေ့များသည် 75 မှ 150 puffs များဖြစ်သည်။ တွန်းလှည်းသည် တစ်နေ့လျှင် အကြိမ် 30 ခန့်သောက်သော အပေါ့စားရှူသွင်းသူများအတွက် သုံးရက်မှ ငါးရက်ကြား ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပျမ်းမျှလူတစ်ဦးသည် 150 ဂရမ် (300mg) CBD vapes မှ puffs 1-1,000 ခန့်ယူသည်။ တစ်နေ့လျှင် အကြိမ် 30 သောက်ပါက လှည်းသည် ငါးရက်မှ ဆယ်ရက်ကြား ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။
2021 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး CBD Vapes နှင့် ပန်းမျိုးကွဲများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် အကောင်းဆုံး CBD vaping ထုတ်ကုန်များ၏ ပြည့်စုံသောစာရင်းကို ပြုစုထားပါသည်။ ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် အာနိသင်၊ အရသာနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ကုမ္ပဏီများသည် ၎င်းတို့၏အလေ့အကျင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများတွင် ထုတ်ကုန်များကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။
နု x အရည်အသွေးမြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းမှုနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုအတွက် စံသတ်မှတ်ရန် မစ်ရှင်တွင် ပါ၀င်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ်သည် CBD နှစ်သက်သူများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွယ်စုံရထုတ်ကုန်လိုင်းတစ်ခုရှိသည်။ ထိပ်တန်းအရည်အသွေးအာမခံချက်အပြင် Nu-x သည် အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Nu-x CBD Vape တစ်ခါသုံး Pen - ဆီဒိုးနား
နု x ဆီဒိုးနား တခါသုံး ဘောပင်
150mg ဆီဒိုးနား တခါသုံးဘောပင် ထူးခြားသောအရသာရှိသည်- ထင်းရှူး၊ ဒိန်ခဲနှင့် citrus ရောနှောထားသည်။ ပေါင်းစပ်မှုသည် သံပုရာချိစ်ကိတ် အနည်းငယ်နှင့် ဆင်တူပြီး အံ့သြစရာကောင်းသည်။ ဘောပင် 200 puff ပါရှိပြီး $14.99 ဖြင့်လည်း အလွန်သက်သာပါသည်။ အနည်းငယ် ပွတ်သပ်ပေးပြီးနောက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက် စီးဆင်းနေသော ပြေလျော့မှုကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းသည် အလွန်ရိုးရှင်းပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဝါသနာပါသော အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက CBD ဘောပင်သည် သင့်အား နှစ်ရက် သို့မဟုတ် သုံးရက်ခန့် အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Nu-x CBD Vape တစ်ခါသုံး Pen - Oceana
Nu-X Oceana တစ်ခါသုံး Pen
သစ်သား၊ ထင်းရှူးနှင့် ဘလူးဘယ်ရီ၏ အရိပ်အမြွက်များ ပေါင်းစပ်မှု Oceana တစ်ခါသုံး ဘောပင်သည် တစ်ကိုယ်လုံး မွှေးရနံ့ ပါ၀င်ပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော အတွေ့အကြုံကို ရရှိစေပါသည်။ full-spectrum CBD ၏ 150mg ကိုကြွားလုံးထုတ်ထားပြီး၊ ဘောပင်တွင် နှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်း လုံလောက်သော puffs 200 ပါရှိသည်။ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော Nu-x မှ တစ်ခါသုံး vape pen သည် သင့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
CBD Vape အကြိုအလိပ်များ - OGK (1g) နှင့် ဂျူပီတာ
နု x OGJ ပန်း ၃ ပွင့် နှင့် ဂျူပီတာ
ကြိုတင်အလိပ်တစ်ခုလျှင် လျှော်ပင် ၁ ဂရမ်
Nu-x ၏ အကြိုအခွေများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် အရသာအပြည့်နှင့် ဆန်းပြားသော ဇာတ်ကားများကို သင်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ နေ့ခင်းဘက်အသုံးပြုရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော၊ အကြိုအလိပ်များသည် သင့်အား စိတ်အေးလက်အေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနှင့် ပိုမိုနိုးကြားလာစေမည်ဖြစ်သည်။ အရသာနှစ်မျိုးနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်တယ်- OGK ပန်း ၃ ပွင့် နှင့် ဂျူပီတာ. OGK ပန်းသည် ပန်းပွင့်များ၊ အသီးအနှံများနှင့် ပန်းပရိုဖိုင်များဖြင့်ပါရှိသော Sativa ၏ လွှမ်းမိုးသောအရသာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Jupiter တွင် သံပုရာသီးအရိပ်အမြွက်များဖြင့် ပိုမိုလေးလံသော မြေကြီးအရောင်ရှိပြီး အပန်းဖြေမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းသည်။
နု x CBD ကဖင်းဓာတ်ရှူဆေး
Nu-x ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြချက်အရ၊ ကဖိန်းဓာတ်ရှူဆေး ကော်ဖီ ခွက် 20 တွင် ကဖိန်းဓာတ် ပါဝင်ပါသည်။ တကယ့်ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက် ထိရောက်မှု မရှိပေမယ့် ရှူဆေးက စွမ်းအင်နဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ တစ်နာရီလျှင် အများဆုံး 10 puffs သောက်ရန်နှင့် တစ်နေ့လျှင် inhaler တစ်လုံးထက် မပိုစေရန် အကြံပြုထားသည်။ သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး vegan-friendly၊ ရှူဆေးတွင် ချောမွေ့မှု 200 ပါရှိသည်။ ကော်ဖီကဲ့သို့ အရသာရှိပြီး အသီးအနှံတိုင်းတွင် အနံ့အရသာရှိသည်။ ကဖိန်းဓာတ်နှင့် ဗီတာမင် B12 တို့၏ အစွမ်းထက်သော ပေါင်းစပ်မှုသည် အာရုံကြောနှင့် သွေးဆဲလ်ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ကဖင်းဓာတ်ကို အလွန်အကျွံစားသုံးပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလည်း ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးသည်။
JustCBD CBD ၏အစွမ်းထက်သောအကျိုးကျေးဇူးများမှအများဆုံးရရှိရန်ရည်ရွယ်သောအော်ဂဲနစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့် CBD ထုတ်ကုန်များကိုစားသုံးသူများအားပေးဆောင်ရန် 2017 ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပါတနာများအကြောင်း အပြည့်အဝ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုပေးရန် ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်မှ စိုက်ပျိုးထားသော လျှော်ပင်ကို အသုံးပြု၍ အထက်နှင့် ကျော်လွန်ပါသည်။ အချိန်တိုအတွင်း JustCBD သည် အံ့ဩဖွယ်ဂုဏ်သတင်းတစ်ရပ်ကိုရရှိပြီး LWeekly နှင့် 303 မဂ္ဂဇင်းများကဲ့သို့ ထင်ရှားသောကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်းများတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Northern Lights 1000mg CBD Vape Cartridge
cannabinoids 1,000 မီလီဂရမ်
JustCBD ၏ ကျည်တောင့်များ သစ်သားထိပ်ဖျားပါရှိသော ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အထုပ်တစ်ခုဖြင့် လာပါ။ ပလပ်စတစ်ကွန်တိန်နာကို လေလုံအောင်ပြုလုပ်ထားပြီး ယမ်းတောင့်သည် ၎င်း၏အနံ့အသက်မပျောက်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ဟိ Northern Lights ကျည်တောင့် အပင်အခြေခံ terpenes နှင့် CBD တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ပန်းပွင့်အောက်တိုသံများဖြင့် ချိုမြပြီး စပ်သောမှတ်စုများ ပါရှိသည်။ ငါချက်ချင်းပဲ စိတ်အပန်းပြေသလို ခံစားခဲ့ရပြီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့နေ့ပြီးရင် puffs အနည်းငယ်ယူတာက အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်အား နိုးကြားစေပြီး ပိုမိုအာရုံစိုက်စေသည်။ ထိမှန်မှုက ချောမွေ့ပြီး လည်ချောင်းမှာ နူးညံ့သလို ခံစားရတယ်။
1000mg CBD Vape Cartridge ချဉ်သောဒီဇယ်
JustCBD ချဉ်သောဒီဇယ် CBD ကတ်ထရစ်
အဆိုပါ ချဉ်သော ဒီဇယ်ကျည်တောင့် Northern Lights နှင့် တူညီသော ပါဝင်ပစ္စည်းများ ပါသော်လည်း ဒီဇယ်နှင့်တူသော အနံ့နှင့် လိမ္မော်ရောင် ရှိသည်။ လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပေမယ့် မွှေးရနံ့က သာယာတာကိုတွေ့တယ်။ နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင် အပျော့စား စွမ်းအင်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ တစ်ခါက ပွဲတစ်ခုမှာ ကျွန်မရဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး ပိုပျော်ရွင်စေတယ်။
အဆိုပါ နာနတ်သီး Express CBD vape လှည်းrအိုင်ဒီယာ လတ်ဆတ်သော နာနတ်သီး၏ ထူးခြားသော အနံ့နှင့် သရက်သီး၏ အရိပ်အမြွက်ကို ပေးသည်။ နွေရာသီလို အရသာရှိပေမယ့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး သုံးရတာ ကောင်းပါတယ်။ Puffs များသည် ကြွယ်ဝသော ခန္ဓာကိုယ်နှင့် အရသာကို ပေးစွမ်းသော်လည်း လည်ချောင်းတွင် အလွန်နူးညံ့သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်နှင့် မြှင့်တင်မှုအတွက် အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်ကိုသတိနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စေသည်။
Metolius Hemp လူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်ထားသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျှော်ပင်ကို အော်ရီဂွန်၊ Bend တွင် အော်ဂဲနစ်စိုက်ပျိုးသည်။ ထို့အပြင်၊ အဖွဲ့သည် ကမ္ဘာမြေသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အတွက် ရေရှည်တည်တံ့သော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များကို အသုံးပြုသည်။ သူတို့ရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှာ အသင်းက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုးသတ်ဆေးအစား ခွေးမများကို ပိုးသတ်ဆေးများအသုံးပြုခြင်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာပြန်လည်နုပျိုစေခြင်း သို့မဟုတ် ရေထိန်းသိမ်းခြင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်း၏ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ပိုမိုသန့်ရှင်းတောက်ပပြီး ကျန်းမာသောအနာဂတ်အတွက် ကာဗွန်ကိုရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုပါသည်။။ "
River Logs သည် CBD နှင့် CBG Hemp Cannagars
Robus cannabinoid ပရိုဖိုင်
တော်လှန်သော လျှော်ပင် မြစ်မှတ်တမ်းများ စျေးကွက်၏ပထမဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ပရီမီယံဆေးပြင်းလိပ်များဖြစ်သည်။ 100% အော်ဂဲနစ် CBD နှင့် CBG ပန်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် လိပ်များကို အော်ဂဲနစ်ဆန်သော ထန်းရွက်ဖြင့် လှိမ့်ထားသည်။ ၎င်းတွင် CBD distillate၊ CBG kief နှင့် CBD isolate ပါရှိသည်။ ဒါကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ပါ။ CBD လိပ်ကို စမ်းကြည့်ပါ။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး ကြံ့ခိုင်သော ပရိုဖိုင်ဖြင့်။
ထုတ်ယူ Labs က ဆေးခြောက်ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုတွင် ပိုင်ရှင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့် ထင်ရှားသော ဝါရင့်ပိုင် CBD ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် အိမ်တွင်းထုတ်လုပ်မှုဖြင့် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး CBD ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူပါသည်။
ထုတ်ယူ Labs က Extract Tank
full-spectrum CBD distillate နှင့် terpenes တို့ကို ကြွားဝါသည်။ Extract Tank စျေးကွက်တွင်သဘာဝအရှိဆုံး CBD vape ထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် CBD၊ CBG နှင့် CBT 500 မီလီဂရမ်ပါဝင်သည်။ အားပြန်မသွင်းနိုင်သော တိုင်ကီများသည် 510-thread ဘက်ထရီများနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး ၎င်းကို အလွန်အဆင်ပြေသော ဆွဲငင်အားဖြင့် အသက်သွင်းထားသည်။ တိုင်ကီတွင် hits 100 ပါရှိပြီး၊ hit တစ်ခုလျှင်တိုင်းတာပါက၊ တစ်ခုစီတွင် cannabinoids 5mg ရှိသည်။ အရသာသည် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်ပြီး ကြွယ်ဝပြီး အထင်ရှားဆုံး မှတ်စုများမှာ ယူကလစ်ဖြစ်သည်။
စိမ်းလန်းသောမြစ် ရုက္ခဗေဒပညာ Asheville, NC တွင် အခြေစိုက်သော မိသားစုပိုင် ဆိုင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏အော်ဂဲနစ် CBD ထုတ်ကုန်များအတွက် လူသိများသော အော်ဂဲနစ် USDA တံဆိပ်ကို လက်ခံရရှိသည့် ပထမဆုံး BC လျှော်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ "ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသော၊ ကျင့်ဝတ်အရရင်းမြစ်ဖြစ်သော ရောင်စဉ်အပြည့်ရှိသော လျှော်ပင်ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရန်ဖြစ်သည်။"
Cherry Mom CBD Vape အကြိုအလိပ်
စိမ်းလန်းသောမြစ် ရုက္ခဗေဒပညာ ချယ်ရီမေမေ
စနစ်တကျ စိုက်ပျိုးသည်။ ချယ်ရီမေမေ လျှော်ပွင့် Indica တွင် လွှမ်းမိုးနိုင်သော strain ရှိသည်။ ပန်းပွင့်အရိပ်အမြွက်တွေပါတဲ့ ဘယ်ရီသီးလို အနံ့။ အရသာက ကြွယ်ဝပြီး ဘူးသီးတစ်ဝိုက်မှာ ရှိတယ်။ ၎င်းကို vaping လုပ်သောအခါတွင်၊ Cherry Mom သည် သင့်အား စိတ်အေးလက်အေးနှင့် ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော ခံစားချက်ကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးသည်၊ နေ့ခင်းဘက်တွင် ငြိမ်သက်စွာ ခံစားရကာ ညနေပိုင်းတွင် အနားယူရန် ကူညီပေးပါသည်။
Amphora သဘာဝနှင့် THC ကင်းစင်သော ပရီမီယံ CBD ထုတ်ကုန်များပါရှိသော ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖိစီးမှု၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ကူညီပေးရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် vape kit များသည် စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးပန်းတိုင်များကို လျှော်ပင်၏စွမ်းအားကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စားသုံးသူများ၏ ကျန်းမာရေးပန်းတိုင်များဆီသို့ အရောက်လှမ်းနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။
CBD ၏ 20%
Lilac နှင့် citrus သံများ
အဆိုပါ ငြိမ်းချမ်းရေး vape လှည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ပြေပျောက်စေပြီး စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို ရရှိစေပါတယ်။ "နွေးထွေးသောပွေ့ဖက်မှု" အဖြစ် ဖော်ပြထားသော vape သည် ငရုတ်ကောင်း၊ စပျစ်သီးနှင့် သစ်သားမှတ်စုများဖြင့် အရသာရှိလှသည်။ အာခေါင်မှာ သိသိသာသာ ချောမွေ့နေပြီး လည်ချောင်းမှာ လုံးဝ မကြမ်းတမ်းပေမယ့်၊ ငါက သူ့ရဲ့ အရသာကို အကြီးမားဆုံး ပရိတ်သတ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကလည်း၊ ကျွန်တော်က အမာခံပရိသတ်ပါ။ ပေးဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
နာကျင်မှု သက်သာစေရန် အထူးကောင်းမွန်သည်။
ရိုးရိုးဂျိန်း ပရီမီယံ CBD ပန်းထွက်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုစျေးသက်သာပြီး လူတိုင်းလက်လှမ်းမီစေရန်အတွက် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှတ်တံဆိပ်၏ အဓိကထုတ်ကုန်များသည် CBD စီးကရက်များနှင့် အဆစ်များဖြစ်ပြီး ဆေးလိပ်သောက်နိုင်သော CBD ထုတ်ကုန်များရရှိရန် အကောင်းဆုံးနေရာအဖြစ် ကျယ်ပြန့်စွာလူသိများသည်။ Plain Jane ကို ခွဲခြားသိမြင်စေသည့်အချက်မှာ ၎င်းသည် အနံ့နိမ့်သော CBD စီးကရက်ကို မိတ်ဆက်သည့် ပထမဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဆေးလိပ်စက္ကူမှလာသော ဆေးခြောက်အနံ့နှင့် အနံ့အရသာကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် ရေသန့်စင်ဆေးကို အသုံးပြုထားသည်။
Plain Jane သည် အနံ့အရသာ အပြည့်ရှိသော Hemp Pre-Rolls များကို စစ်ထုတ်ထားသည်။
CBD ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း
အဆိုပါ စစ်ထုတ်ထားသော အရသာအပြည့်ရှိသော လျှော်လိပ်များ Plain Jane မှ Resin Berry နှင့် ACDC လျှော်မျိုးကွဲများ ပေါင်းစပ်ထားသည့် Elektra မျိုးစိတ်ဖြင့် ရောက်ရှိလာပါသည်။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များမှတ်စုများ၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့် ထင်းရှူးအနည်းငယ်တို့နှင့်အတူ အရသာသည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သောအခါတွင် ဤအကြိုအလိပ်များသည် သင့်အာခေါင်တွင် စွဲမြဲနေသော အံ့သြဖွယ်ရနံ့ကို ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ အကြိုအလိပ်များတွင် ဆေးလိပ်နှင့် နီကိုတင်း ကင်းစင်ပြီး ဖြည့်စွက်စာများ မပါဝင်ပါ။ အကြိုအလိပ်တစ်ခုစီတွင် CBD ၏ 72mg ဝန်းကျင်ပါရှိသည်။ လျှော်ပစ္စည်းများကို 8% CBD ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
ရိုးရိုးဂျိန်း အရသာအပြည့် CBD ချုံ့
cannabinoids ၏ 14.68%
Full Flavor Plain Jane Trim သည် အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး အရသာအပြည့်ဖြင့် ခိုင်မာသောအတွေ့အကြုံကို အာမခံပါသည်။ သက်ရောက်မှုများသည် ညင်သာစွာ နှိုးဆွပြီး ညင်သာစွာ ကုထုံးဖြစ်သည်။ ဖြတ်ပိုင်းကို ဓာတ်ခွဲခန်းအသေးစိတ်ပါရှိ၍ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး လေဟာနယ်အလုံပိတ်အိတ်ဖြင့် ပါရှိသည်။ အကြိုအလိပ်များပြုလုပ်ရန် ပြီးပြည့်စုံသည်၊ အနားသတ်တွင် Plain Jane's ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ အားလုံးပါဝင်ပါသည်။ ပရီမီယံဘူးသီး.
TribeTokes ကို Degelis Tufts Pilla မှ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ Degelis သည် သူမ၏ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းစနစ်ကို မထိခိုက်စေသော သန့်ရှင်းသော CBD vapes များထုတ်လုပ်ရန် စတင်စဉ်းစားလာခဲ့သည်။ သူမသည် လယ်သမားများ၊ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များ၊ ထုတ်ယူသူများနှင့် လက်တွဲပြီး သဘာဝအတိုင်း၊ မူပိုင် vape oil formula ကို ဖန်တီးသည်အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အန္တရာယ်ရှိသောဓာတုကင်းစင်သော vape ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများစာရင်းတွင် ထင်ရှားသောဆိုင်ခွဲများတွင် TribeTokes အပါအဝင် 2019 ခုနှစ်တွင် အမှတ်တံဆိပ်သည် ထင်ရှားလာပါသည်။
75% cannabinoids နှင့် 10% terpenes
သွားရင်းလာရင်းအသုံးပြုရန် ပြီးပြည့်စုံသော၊ TribeTokes မှ တစ်ခါသုံး ဘောပင် vape pen က သုံးရတာ အလွယ်ဆုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ငါကြိုးစားဖူးတယ်။. ၎င်းကို ဗူးအပြင်ဘက်တွင် ယူလိုက်သည်နှင့် အသုံးပြုရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရန် မလိုအပ်ပါ — ၎င်းကို ရှူသွင်းခြင်းဖြင့် အသက်ဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည်ကြိုတင်ငွေကောက်ခံခြင်းပါရှိသည်။
CBD vape များ
JustCBD Northern Lights Cartridge
JustCBD Pineapple Express Cartridge
JustCBD Sour Diesel Cartridge
Nu-x Jupiter အကြို Roll
CBD သုံးသပ်ချက် 2022 ကိုမြှင့်တင်ပါ။
2022 တနင်္ဂနွေနေ့ SCARIES သုံးသပ်ချက်